Explore Debit Card - KBZ Bank
ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Explore Debit Card ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေသားသယ်ဆောင်ရန်မလိုပဲ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ မီနီမတ်များနှင့် Online စျေးဝယ်မှုတို့တွင် ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်နိုင်ပြီး KBZ ATM စက်များနှင့် MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင်လည်း ငွေထုတ်ယူ နိုင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ KBZ Explore Debit Card ကို နီးစပ်ရာ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။Debit Card, you can make payments online, at mini marts, shopping centers and restaurants without the hassle of carrying cash all the time.
Make cash withdrawals at any of KBZ’s vast network of ATMs as well ATMs of other banks.
ATM စက်များတွင် (၂၄)နာရီပတ်လုံး ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
Make payments at E-commerce websites
KBZ Online Banking ကို အသုံးပြု၍ အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်
အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူများ Explore Debit card ကိုုလေ ျှာက်ထားနိုုင်ပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင် (8%) အတိုးခံစားရရှိနိုင်ခြင်း
မည်သည့်ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွင် မဆိုလွယ်ကူစွာဖြင့် ငွေသား ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း
ATM စက်များတွင် ကမ္ဘောဇကတ်အချင်းချင်းလွယ်ကူစွာဖြင့် စာရင်းလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း
ငွေသားကိုင်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
နည်းပညာသစ်ဖြစ်သော EMV Smart Chip ကတ် အသုံးပြု ထားသောကြောင့် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မသမာသူများမှ ခိုးယူ အသုံး ပြုခြင်း၊ ငွေလိမ်လည်ထုတ်ယူခြင်းတို့ကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
E-Commerce အသုံးပြုနိုင် သော Website များတွင် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
EMV Smart Chip ကဒ် အသုံးပြု ထားသောကြောင့် မသမာသူများ မှ ခိုးယူအသုံးပြုခြင်း၊ ငွေလိမ် လည် ထုတ်ယူခြင်းတို့ကို အပြည့် အဝ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
Online Banking ကို အသုံးပြု၍ အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှု များအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်း၊ မိတူ္တ
Renewal of KBZ Debit (ATM) Card
KBZ Debit (ATM) Card was introduced in 2012 to it’s customers with5years of card lifespan. To continue enjoying the benefits and convenience of the card, customers are urged to renew their card3months before the expiry of the card for free of charge.
■ For more details, Click FAQ.
■ To learn more about Terms & Conditions, Click here.
Notification of Card Dispute & Chargeback Policy
Kindly take note the below timeline to dispute any transactions arising from your card account. Please check your statement regularly. Failing which you may loose your right to dispute the transaction.
KBZ Debit Cards
Within 30 days from the transaction date
KBZ Credit Cards
Within 60 days from the transaction date